အော်တိုလောင်စာဆီတိုင်ကီအထူးစက် - တရုတ် Kingswel Machinery
ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရအချို့သောအထူးစက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ WE ။ ထိုသို့သော pallet အများအပြားအထူးပုံထုတ်ကုန်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကို, ကြီးမားတဲ့စက်ကိုလိုက်နာမှမော်တော်ယာဉ်ပစ္စည်းများအတွက်အထူး extrusion စနစ်, ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းပုံကို 3D လေကြောင်းပြွန်စက်အဖြစ်။
အော်တိုဆီ Tank များအတွက်အထူးစက်
ဒီအစက် extruder စနစ်၏ခြောက်လအစုံ, ခြောက်လအလွှာသေခေါင်းကိုစနစ်, ဒါပေါ်မှာ platen-ရွေ့လျားစနစ်, ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအား, pneumatic စနစ်, လျှပ်စစ်စနစ်, အော်တိုထဲကယူစနစ်နှင့်နေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဒီစက်ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျပစ္စုပ္ပန်မှာစျေးနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည် optimized ရိက္ခာနှင့်အတူမော်ဒယ်ဖြစ်သည့်ဒီစက်ကိုလုံးဝတူညီမော်ဒယ်၏ဂျာမန်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်စသည်တို့ကိုယူနစ်, နယ်, ရောနှော, အအေးစင်တာအလိုအလျောက်တင်စနစ်, အတူစုဝေးနိုင်ပါတယ် ။
ဒီအစက်အထူး to100L တက်ခြောက်လအလွှာလောင်စာဆီတိုင်ကီအဘို့အဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
1. မက်စ်။ လောင်စာဆီတိုင်ကီ၏အသံအတိုးအကျယ် ------------------------ ပေါင်း 100 L ကို
အလွှာ၏ 2. နံပါတ် ----------------------------------- 6
3. Extruder စနစ်က
အတွင်းစိတ်အလွှာများနှင့် regrind အလွှာ
ပလပ်စတစ်စွမ်းရည် (ကီလိုဂရမ် / ဇ) ----------------------- 270 ×2(စတင်)
ဆလင်ဒါ (KW) ၏အပူပါဝါ ----------------------- 35,6 × 2
extruder ၏အပူပါဝါ (KW) ------------------------ 90 × 2
ပလပ်စတစ်စွမ်းရည် (ကီလိုဂရမ် / ဇ) ------------------------ 20 (စတင်)
ဆလင်ဒါ၏အပူပါဝါ (KW) ------------------------ 7.5
extruder ၏အပူပါဝါ (KW) ------------------------ 15
ပလပ်စတစ်စွမ်းရည် (ကီလိုဂရမ် / ဇ) ------------------------ 65 (စတင်)
ဆလင်ဒါ၏အပူပါဝါ (KW) ----------------------- 21.5
extruder ၏အပူပါဝါ (KW) ------------------------ 37
4.The ခြောက်လ layer ရဲ့ Co-extrusion သေဆုံးဦးခေါင်း
မှိုခေါင်းကိုအပူပါဝါ (KW) ------------------------ 75
မှိုခေါင်းကိုအပူကဏ္ဍများ --------------------------- 12
ပါးစပ်အချင်း (မီလီမီတာ) --------------------------- 300-600 သေဆုံး
Parison ထိန်းချုပ်မှုအမှတ်အရေအတွက်သည် ------------------------- 100 ဦး
မှိုပန်းကန်အတိုင်းအတာ (W * H ကို) (မီလီမီတာ) ---------------- x ကို 1800 1400
မှိုပြား (မီလီမီတာ) အကြားအကွာအဝေးကို ---------------------- ~ 1650 650
Clamping အင်အားစု (KN) ------------------------------- 1000
Moving-မှိုလေဖြတ် (မီလီမီတာ) -------------------------- 1000
Moving-မှိုမြန်နှုန်း (မီလီမီတာ / စက္ကန့်။ ) --------------------------- 250
အထွေထွေစည်းဝေးပွဲကိုပါဝါ (KW) ------------------------- 566
ပျမ်းမျှစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (KW / ဇ) ----------------------- 340
Air ကိုပေးဝေရေးဖိအား (MPa) ---------------------------- 1.0
Air ကိုစားသုံးမှု (M 3/ မိနစ်) ----------------------------- 3
အေးရေဖိအား (MPa) ------------------------- 0.3
အေးရေစီးဆင်းမှု (M3 / မိနစ်) ---------------------- 50 (<300C)
7. အလေးချိန် (တစ်တန်ကို။ ) ------------------------------ 100 ခန့်
8. စက်အတိုင်းအတာ (L ကို * W * H ကို) (长 x ကို宽 x ကို高) (ဍ) ----------- 16 x ကို 9.5x 8
ယခင်: FT စီးရီး
200l အပြာရောင် Water tank မှိုစက်မှုတ်
3000l Water tank မှိုစက်မှုတ်
လောင်စာဆီ Tank ထိုးနှက်မှိုစက်
ပလတ်စတစ် Tank မှိုစက်မှုတ်
ပလပ်စတစ်ရေ Tank မှိုစက်မှုတ်
Sump Tank မှိုစက်မှုတ်
Water tank ထိုးနှက်မှိုစက်
E-mail ကို: salesnj@kingswel.com.cn
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့် EMP များဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေချာစေရန် ...
လူအပေါင်းတို့၏ဒေသတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ Kingswel Machinery အသက်တာ၏သွားလာချသာမန်လူများတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်သစ်ကို coronavirus, အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှတက်, ကတည်းက, ယူနစ်အားလုံးအဆင့်ဆင့်တက်ကြွစွာကောင်းတစ်ဦးညလုပ်ဖို့ action ကိုယူပြီးနေကြသည် ...